दशैंको दिनमा पर्यो यस्तो बज्रपात, छोरी भन्छिन् ‘बुवालाई बचाउन म आफुलाई बेच्न पनि तयार छु’ (भिडियो हेर्नुस्) – Dainik Sangalo
October 28, 2020 243
काठमाडौ । सन्तानका लागि सबैभन्दा ठूलो सहारा अभिभावक हुन् । तर जब आफ्ना बुवाको अन्तिम अवस्था आउँछ सन्तानका लागि त्यो भन्दा ठूलो पी डा केही पनि होइन । कमानसिंह विकको अहिले बाँकेको कोहलपुर स्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।
तीन वहिनी दिदी बहिनी र एक छोराका बुवा समेत रहेका कमानसिंहको एउटा खुट्टा नै छैन । कोहलपुर स्थित अस्पतालले उनको उपचारका लागि भारतको लखनउ रेफर गरेको छ । तर उपचारका लािग उनीहरुसंग पैसा छैन । उपचारका लागि करिब ६ लाख रुपैया खर्च हुने चिकित्सकले बताएका छन् ।
तर उपचार गर्न पैसा नभएका कारण उनलाई लखनउ लगिएको छैन । दागंको तुलसीपुरका स्थानिय उनलाई कसैले प्र हार गरेर घाइेत बनाएका हुन् । उनी दशैंको बेलामा कतै बाहिरवाट घर फर्कदै थिए त्यती नै बेला उनलाई कसैले आ क्र म ण गरेको थियो । उनको हात र खुट्टामा चोट लागेको छ ।
उनी भान्जाको विवाह भोज खाएर घर फर्कदै थिए । साँझ करिब ८ वजे तिर उनी माथि यस्तो घटना भएको हो ।
बुवाको अन्तिम अवस्थामा देखेर उनकी १७ वर्षकी छोरीले रुँदै आफ्नो बुवालाई उपचारका लागि सहयोग गर्न अपिल गरेकी छन् । उनले बुवा नै आफुहरुको सहारा भएकाले उनलाई बचाउन आफुलाई बेच्न पनि तयार छु भन्दै छोरीले रुँदै बिलौना गरेकी छन् ।
आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेका कमानसिंहको परिवारमा अहिले वज्रपात परेको छ । छोरीले भनिन्, मेरो बुवालाई बचाइदिनुस्, बुवालाई बचाउन म आफुलाई बेच्न पनि तयार छु । घटना कसले गरायो भन्ने उनीहरुले थाहा पाएका छैनन् । घटनावारे प्रहरीमा जानकारी भएको भएपनि अहिले सम्म घटनाको वास्तविकता खुलेको छैन ।
Prevदशैंको दिनमा पर्यो यस्तो बज्रपात, छोरी भन्छिन् ‘बुवालाई बचाउन म आफुलाई बेच्न पनि तयार छु’ (भिडियो हेर्नुस्)
Nextएसपी गंगा पन्तविरुद्ध प्रदर्शन, गंगा पन्तको वीरगंजमा पुतला दहन
धनगढी असई ह,त्याः घटनामा संग्लन भएको आशंकामा १३ जना प,क्रा,उ
भर्खरै बिमानस्थलबाट दिल्लीका लागि उडेको विमान दुर्घटना ! मृतक पर्ती (RIP) लेख्नुहोला ,!
अब काठमाडौँ आउन पास नचाहिने !
देउवालाई पहिले सम्झाउने, नटेरे घेर्ने र अनशन बस्‍ने इतर पक्षको तयारी
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (126307)
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (96642)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (73719)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (68963)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64058)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (54835)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (49892)
समाचार युवा नेता रामकुमारी झाक्री घा’इ’ते युवाहरु आ’क्रो’शित ( हेर्नुहोस् भिडियो ) (43663)
खुसिको खबर – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता !!! (41775)
फागुन २१ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
सरकारद्वारा विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, शुक्रबार प्रधानमन्त्री र ‘विप्लव’ले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने
ओलीलाई हटाएर कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पनकै लागि पार्टी फुटाएको माधव नेपालको खुलासा
केही समयमै वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दिए बचन